jeudi, 14 décembre 2017 19:00
Farafangana: Namalifaly ireo ankizy sahirana beazin-dry masera ny depiote
Nanolotra vatomamy sy ranomboankazo ary vary fotsy ho an'ireo ankizy sahirana beazina ao amin-dry masera Farafangana ramatoa Randrianasolo Pauline, solobavambahoaka voafidy tao Vondrozo. Nojereny manokana ireto ankizy amin'izao ankatoky ny fetin'ny krisimasy izao mba hamalifaliana azy ireo.
jeudi, 14 décembre 2017 18:49
Tanandava Toamasina: Vary simba sy lo nodorana mbola nifandrombahan’ny olona nalaina
Notanterahina tao Tanandava ny alatsinainy 11 sy ny talata 12 desambra teo ny fandorana ireo vary simba sy lo miisa 1.016 lasaka an’ny orinasa “Moto Commodities”.
Vao lasa anefa ny ekipan’ny “Task Force” nanao ny fandorana ny vary dia nifandrombahan’ny olona satria tsy may tanteraka na efa natao tao anaty lavaka sy nodorana tamina solika aza.
Ahiana ny fahasalaman’ny mponina mihinana ireo vary simba sy lo izay efa voamarina tamin’ny fitiliana natao tamin’ny laboratoara fa tsy azo hanina intsony.
jeudi, 14 décembre 2017 18:25
Faritra Boeny: Mikatona manomboka rahampitso ny jono an-dranomamy
Manomboka ny 15 desambra 2017 hatramin’ny 15 febroary 2018 no fotoana hikatonan’ny fanjonoana an-dranomamy ato anatin’ny faritra Boeny. Io ny fanambarana nataon’ny talem-paritry ny jono sy ny harena anaty rano, Rakotonirina Etienne ny maraina teo.
Namoaka didim-pitondrana ny faritra mandidy ny hanaterana ireo atontanisan’ ny tahirim-bokatra sisa ao amin’ireo trano fandraisam-bahiny lehibe sy ny mpanangom-bokatra eto an-toerana, ka ao anatin’ny folo andro no tsy maintsy hanaovan’izy ireo izany eny anivon’ny sampandraharaham-paritry ny jono sy ny harena anaty rano.